Madaxweynaha Puntland oo soo xiray shirka Jiheynta Siyaasadda ... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Puntland oo soo xiray shirka Jiheynta Siyaasadda ee Saddexda maalin ka socday Garoowe.
“Waxaan Alle ka sokow guulihii aan gaarnay uga mahadnaqaynaa ciidamada qalabka sida ee Puntland oo maalmaha aan halkan joogney ammaanka si habsami leh u sugayey, wan ku faraxsannahay runtii shirkaan agaasinkiisii, socod siintiisii iyo natiijadii ka dhalatay intaba ay ahaayeen kuwo ay taariikhdu xusi doonto”. ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa dhankiisa bogaadiyey qaabka wanaagsan ee uu usoo dhammaaday shirku, waxaana uu xoojiyey qorshaha Madaxweynaha Puntland ku hirgeliyey yoolaalkii uu ku galay doorashada, taasi oo bud-dhig u ah dhammaystirka Jihaynta siyaasadda Xukuumadda cusub ee dawladda Puntland.
Kan-xigaCiidamada ammaanka oo xiray inta bada...
Kan-horeMadaxweyne Farmaajo iyo wafdigii la s...
45,317,126 unique visits